Mbo jeune zatôvolahy, niteraka viavy Jamina agnarany, i mamany iny isaka teteky, ah baban'i Jamina e, mihetsiky hely, indeso aty fatana io baban'i Jamina, raha natahoranao hilefa moan zatôvo io, sa ho voninao passport, sa misalasala anao sao tsy zatôvo io tegna baban'i Jamina, ka amafisinao tsara fa nihinazy Jamina, ka baban'i Jamina tsy mety mahay efa, nanjary very anarana zatôvo lahy. Samy mandry mojogno.Patrick
Hanao tatatra itaritana rano any atsimo 150km tsy atao, nefa i Gallieni aza tamin'ny 1896 nahavita tatatra 665Km Canal des Pangalanes. Mahalalà menatra leretsy amin'ity politikan'anataka sy trosa lava ity e. Hanin-kohanintsika avy dia mbola iandrasana tosika avy any ivelany. Ny tany malalaka sy mamokatra, ny rano feno fa ariam-potsiny an-dranomasina. Tafandria mandry.Patrick
Nande teny an-tsena, zaho rery no manao CVO (Cache Vava Orona) (Tsy TG an, any atsimo lazaina fa CVO ny Toaka Gasy) Nanontany ilay mpivarotra : - Marary anga Président Patrick - Fa ahoana- To manao cache bouche, matahotra ny amindra aretina anga, sa avy any an-dafy ianao elaela tsy hita io?- Ohatran'ny tsy naharaka aho an, anga hoy aho, efa vita ny Covid?- Efa milamina be an, efa Jerosalema vaovao isika zao Tena mbola betsaka ny voa amin'azy io fa tandremo leretsy e. Tafandria mandry ePatrick
Vary 500 000 tonnes no afarana any ivelany isan-taona, tsy vaovao io fa efa an-taonany maro, ary mbola tohizan'izao fitondrana izao. 5% n'ny tany eto Madagasikara ihany no misy fambolem-bary, raha 4-7 tonnes no vokatra vary tokony hiakatra isaky ny hektara, dia mbola 2tonnes eo ihany ny salan'isa eto amintsika (rendement), izany hoe velaran-tany 250 000Ha any izany no mahavokatra io vary 500 000tonnes afarana io. Ka safidy izany no atao, na vokarina eto an-toerana io vary io, izay ampisondrotra ny fahefa-mividin'ny mpamboly Malagasy, tsy ampivoaka ny devise na vola vahiny, na amorona asa ho an'ny mpamboly any Inde sy Pakistan, ary am-panankarena ireo karana mpanafatra entana. Ny "kaly tsinjo" rahateo no malaza ankehitriny, be indray ny anao trano, aiza no aharahana firy kapoaka no narotsaka teo, sy iza sy iza avy no nahazo vary teo, sa ho asiana Digitalisation Tsaky Pop indray? Tafandria mandryPatrick
Ny tonon-kira no aleo hiteny - Anao niany e, tsy maintsy mandry aminahy- Oh ry vorona iry e, etsy hafarako kely Tafandria mandryPatrick
Natao debaka (antoka) angaha izy iny tamin'izany, ka rehefa natao lavanty, dia niazakazahana novidiana satria tsy foina, sa ve nisy naka izy iny, sa nisy nangalatra, dia jerem-potsiny ve izay naka na nangalatra, na nandroba fa dia faly fotsiny hoe niverina novidiana ilay raha. Misaotra aloha na izany aza fa tafody an-tanindrazana izy iny, aza adino koa fa ny an'i Printsesy Soazara mba misy very koa, mila tadiavina ireo vakoka isam-paritra, ny lapa moa ao dia efa tontan'ny ela, mba mila kolize koa. Tafandria mandry e.Patrick
lundi, 07 décembre 2020 21:33
Madagasikara nosy lehibe fahaefatra maneran-tany
Pilo kely : Madagasikara nosy lehibe fahaefatra maneran-tany, misy 5000km ny sisin-dranomasina, nefa tsy mihinana trondro sy tsy mahay milomano ny ankabeazan'ny mponina. Tafandria mandry e.Patrick
Pilo kely : Ny Ariary ananana fahefana tsy ferana tsy hiovaova, fa ny vidim-bary tsy voafehy no ferana Tafandria mandry e.Patrick
Ny fenitra fanamboaran-dàlana dia tsy maintsy misy antoka 10 taona raha kely indrindra (garantie décenale), ka io dia takiana taratasy avy amina trano fiantohana sy banky mihitsy, izay omen'ilay orinasa. Raha tsy misy izay antoka izay, dia tsy mahazo tsenam-panjakana fanaovana fotodrafitrasa vaventy. Raha simba izany ny làlana ao anatin'ny 10 taona, dia manamboatra ny tompon'ny orinasa, raha efa maty ny orinasa, dia ilay trano fiantohana na banky no miantoka ny fanamboarana azy. Raha nisy fiara hafa nitrongy ilay làlana na nandona tetezana, dia ilay trano fiantohan'ilay fiara nanimba no miantoka, io ilay assurance RC (Responsabilité civile aloantsika, ialana polisy ho an'ny sasany, fa ny dikan'iny, dia ny fiaranao tsy iantohan'ny trano fiantohana fa ny zavatra nosombainao na olona nodominao no iantohany. Ny trano fiantohan'ny fiara nandona anao kosa no miantoka anao raha izy no diso. Ka na inona izany na inona nahasimba ilay làlana nandaniana vola, dia ao anatin'ny 10 taona dia tokony tsy misy aloan'ny fanjakana, ankoatran'ny fikojakojana, sy ny fanalàna loto sy bozaka amin'ny tatatra. Izay no izy raha tsy misy kolikoly sy akamakama. Tafandria mandry ePatrick (Sary nindramina RN33bis Ambato Boeny)
Pilo kely : Tandremo sao katsaka nasiam-panovana (OGM - Maïs transgénique) no zaraina amin'ny kere any atsimo Tafandria mandry e.Patrick